Kitra vehivavy – «Cosafa cup 2018»: lalaon’ny samy resy ny an’ny Barea sy i Malawi | NewsMada
Kitra vehivavy – «Cosafa cup 2018»: lalaon’ny samy resy ny an’ny Barea sy i Malawi
Hitohy, anio zoma ao amin’ny kianja Isaac Wolfson Stadium, Afrika Atsimo, ny andro faharoa eo amin’ny fiadiana ny “Cosafa cup 2018”, taranja baolina kitra vehivavy. Fihaonana, ho an’ireo firenena aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika. Lalaon’ny samy resy ny fihaonan’ny Barea de Madagascar sy i Malawi.
Samy tojo tsy fahombiazana avokoa mantsy ny roa tonta, teo amin’ny andro voalohany, notanterahina ny alarobia lasa teo, ho an’ny sokajy “A”. Raha tsiahivina, lavon’i Afrika Atsimo, tamin’ny isa tery 2 no ho1, ny Barea de Madagascar ary resin’i Botsoanà, tamin’ny isa mazava 2 no ho 0, kosa ry zareo Malaoita.
Tsiahivina fa efa niray vondrona tamin-dry zareo Malaoita ny Malagasy, nandritra ny “Cosafa 2017” ka resin’izy ireo, tamin’ny isa 6 no ho 3, ny Barea, tamin’io. Samy tsy nivoaka vondrona avokoa moa ny ekipa roa tonta, tamin’izay. Hanala vela izany ny Malagasy, amin’ity anio ity. Heverina fa efa tafiditra tsara ao anatin’ny lalao amin’izay ireo mpilalao rehetra, taorian’iny faharesena, nanoloana an-dry zareo mpampiantrano, iny. Etsy ankilany, hiady izay ho lohany kosa ao amin’ity vondrona misy ny Barea de Madagascar ity i Afrika Atsimo sy ry zareo Botsoanezy, efa samy manana isa 3 avy.
Marihina fa lalao farany ho an’ny Barea de Madagascar ny fihaonana amin’i Botsoanà, ny asabotsy 15 septambra ho avy izao.